के नयाँ चलचित्रमा दीपकराज र निश्चल टिमअप गर्दैछन् ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
के नयाँ चलचित्रमा दीपकराज र निश्चल टिमअप गर्दैछन् ?
कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गर्नुभन्दा अगावैदेखि ठप्प रहेको चलचित्र क्षेत्र अझैसम्म चलायमान हुन सकेको छैन । देशभरका सिनेमा हल बन्द छन् । निर्माण सम्पन्न भएका चलचित्रको रिलिज अन्योल छ । निर्माणको तयारीमा रहेका चलचित्र सरकारको अनुमति कुरेर बसेका छन् । सरकारले चलचित्र क्षेत्रमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्दा अब चलचित्र क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
सरकारले चलचित्र निर्माण र प्रदर्शन खुल्ला गरेपछि चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ठूला मेकरबीच सहकार्य हुनुपर्ने र ठूला स्टारले शेयरमा काम गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको अवस्थामा चलचित्र क्षेत्रका ठूला मेकरको रुपमा कहलिएका दीपकराज गिरी र ‘लुट’ पछि नेपाली चलचित्रमा कथा भन्ने शैली नै परिवर्तन गरेका निश्चल बस्नेतबीच नयाँ चलचित्रमा सहकार्यको चर्चा चलेको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंस्थित गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टमा दीपकराज र निश्चलसँगै निर्देशक दीपाश्री निरौला र अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काबीच विशेष भेटघाट भएको थियो । त्यहाँ उनीहरुले एकसाथ डिनर पनि गरेका थिए । स्वस्तिमा र दीपाश्रीले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा गोकर्ण रिसोर्ट घुमेका र कुराकानी गर्दै डिनर गरेका तस्विर तथा भिडियो क्लिप्सहरु शेयर गरेका छन् ।
दीपकराज र निश्चलको यो भेटघाटलाई चलचित्रकर्मीहरुले विशेष रुपमा लिएका छन् । नयाँ चलचित्रमा सहकार्यका लागि उनीहरुबीच भेटघाट भएको हुनसक्ने कतिपयको आँकलन छ । यद्यपि, उनीहरुबीच कुन शिलशिलामा भेटघाट भएको थियो, त्यो भने खुलेको छैन । यो अवस्थामा दीपकराज र निश्चलबीच टिमअप भएको खण्डमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि फाइदाजनक सावित हुनेछ ।